Service ဆိုတဲ့ (၀န်ဆောင်မှုပေးခြင်း) ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေမှာ…
Smile Ever (အမြဲတမ်း ပြုံးရွင်စွာနေပါ) Eye Contact (၀န်ဆောင်မှုပေးတဲ့အခါ မျက်လုံးချင်းဆုံပါစေ) Respect to All (အားလုံးကို လေးစားစွာဆက်ဆံပေးပါ) Value to Guest (မိမိ၏ဖောက်သည်ကို တန်ဖိုးထားပါ) Interest Showing (စိတ်ဝင်စားမှုကို ဖော်ပြပေးပါ) Creative Service (၀န်ဆောင်မှုကို ဆန်းသစ် စွာဖန်တီးပေးပါ) End with “Thanks” (အဆုံးသတ်မှာ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါ) Customers will stop doing business, Not product Quality because of they Feel Poorly Treated (ဖောက်သည်များ၏ အားပေးမှုရပ်တန့်မှုသည် ပစ္စည်း၏အရည်အသွေး မကြိုက်နှစ်သက်မှုထက် ထိုဝန်ဆောင်မှုကို စိတ်တိုင်းမကျခြင်းသာဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါတယ်)၊ ဒါကြောင့် ခေတ်ပြိုင်စီးပွားရေးတဲ့ တူညီ တဲ့ဈေးကွက်၊ ၀ယ်လိုအား အနေအထားမှာ ၀န်ဆောင်မှုကို မဟာဗျူဟာအဖြစ်အသုံးပြုပြီး ဈေးကွက်အောင်မြင်မှုကို သေချာပေါက် ဖန်တီးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖောက်သည်များအပေါ် တန်ဖိုးထားစေဖို့ရာ Customer Values အချက်များကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ ကိုးကားဖော်ပြ ပေးထားပါတယ်။
Always remember that Customer Pay Your Salary: (ဖောက်သည်ဟူသည် မိမိအား ၀င်ငွေပေးနေသူဟု အမြဲတမ်းမှတ်ယူပါ) Every Customer wants to Feel Important and Valued: (ဖောက်သည်တိုင်းသည် အရေးကြီးမှု၊ တန်ဖိုးပေးမှုကို လိုချင်ကြသည်) Customer want “Fast” “Convenience” “Need Guide”: (ဖောက်သည်များသည် မြန်ဆန်မှု၊ အဆင်ပြေမှု၊ လမ်းညွှန်မှုကို ကြိုက်၏) Give Customer Satisfactions! So, Returen Again & Again: (ဖောက်သည်များ သည် စိတ်ကျေနပ်မှုရှိပါက ထပ်ခါထပ်ခါ ပြန်လာပေမည်) Unhappy Customer will tell more People his/her Negative: (အဆင်မပြေသော ဖောက်သည်များ သည်ထိုမကောင်းကြောင်းကို အများအားပြန်ပြောပေမည်) For Service Problem (Listen) (Apologize) (Solve) (Thanks) LAST Formula. (ဖောက်သည်များ၏ ၀န်ဆောင်မှုပြဿနာများအား နောက်ဆုံးအခြေအနေအထိ… (နားထောင်ခြင်း) (တောင်းပန်ခြင်း) (ဖြေရှင်းခြင်း) (ကျေးဇူးတင်ခြင်း) အဆင့်များဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။
No Customer = No Business (ဖောက်သည်များမရှိပါက စီးပွားရေးဟူသည်ရှိမည်မဟုတ်သဖြင့်) ကောင်းမွန်သာလွန်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေကို ဖန်တီးပေးပြီး Customer Satisfy ဖောက်သည်စိတ်ကျေနပ်မှုကို ရယူလျှက် ရေရှည်ခံစီးပွားရေးကို ဖန်တီးတည်ဆောက်နိုင်စေဖို့ ဈေးကွက်မဟာဗျူဟာဆိုင်ရာ အကြံပြုမျှဝေရေးသားပေးလျှက်။ ဆက်လက်ကြိုးစားပါဦးမည်။